2GB PST Faira Dambudziko. Oversized PST Faira Dambudziko.
musha Products DataNumen Outlook Repair Oversized PST faira dambudziko (PST saizi faira inosvika kana kupfuura 2GB muganho).
Ruzivo rwakadzama nezve Oversized PST Faira Dambudziko
Chii chinonzi Oversized PST Faira Dambudziko?
Microsoft Outlook 2002 uye shanduro dzekare dzinogumira saizi rePamoyo Mafolda (PST) faira ku2GB. Chero nguva iyo PST faira painosvika kana kupfuura iwo muganho, iwe haugone kuvhura kana kurodha zvekare, kana iwe haugone kuwedzera chero nyowani data kwariri. Izvi zvinodaidzwa kuti zvakakurisa PST faira dambudziko.
Outlook haina nzira yakavakirwa-mukati yekununura yakawandisa PST faira isingasvikike. Zvisinei, Microsoft inopa chokunze chishandiso pst2gb sechimbichimbi, icho chinogona kudzoreredza iyo faira kune chinoshandiswa chinzvimbo. Asi kune zvimwe zviitiko, chishandiso ichi chinokundikana kudzoreredza mafaira akawandisa. Uye kunyangwe iyo yekudzoreredza ikabudirira, imwe dhata inotorwa uye lost zvachose.
Microsoft yakaburitsa mapakeji akati wandei kuitira kuti kana iyo PST faira yasvika pamuganhu we2GB, Outlook haigone kuwedzera chero dhata nyowani kwairi. Iyi mashini, kune imwe nhanho, inogona kudzivirira iyo PST faira kubva pakuwedzeredzwa. Asi kana muganhu wasvika, iwe haugone kuita chero eanoshanda, sekutumira / kugamuchira maemail, kunyora zvinyorwa, kuseta mamiririri, nezvimwe, kunze kwekunge wabvisa yakawanda data kubva kuPST faira uye tsindirana iyo shure kweizvozvo kudzikisira saizi yayo. Izvi hazviite zvakanyanya kana data reOptlook richikura nekukura.
Kubva Microsoft Outlook 2003, imwe PST faira fomati inoshandiswa, iyo inotsigira Unicode uye haina 2GB saizi muganho zvakare. Naizvozvo, kana iwe uri kushandisa Microsoft Outlook 2003 kana 2007, uye iyo PST faira inogadzirwa mune nyowani Unicode fomati, saka haufanire kunetseka nezvedambudziko rekuwedzeredza zvakare.
1. Paunoyedza kurodha kana kuwana yakawandisa Outlook PST faira, iwe uchaona mhosho mameseji, senge:
Zvikanganiso zvakaonekwa mufaira xxxx.pst. Regedza ese maapplication-anotumirwa netsamba, wobva washandisa Inbox Kugadzirisa Turu.
iko 'xxxx.pst' izita reiyo Outlook PST faira kutakurwa kana kuwanikwa.
2. Paunoyedza kuwedzera mameseji matsva kana zvinhu kuPST faira, uye panguva yekuwedzera maitiro, iyo PST faira inosvika kana kupfuura 2GB, iwe uchawana Outlook inongoramba kugamuchira chero dhata nyowani pasina zvichemo, kana iwe uchaona. mhosho mameseji, akadai se:
Iyo faira haina kukwanisa kuwedzerwa kufaira. Chiito hachina kukwanisa kupedzwa.
Basa 'Microsoft Exchange Server - Kugamuchira' yakataurwa kukanganisa (0x8004060C): 'Kanganiso Isingazivikanwe 0x8004060C'
Iyo faira xxxx.pst yasvika pakukwirira kwayo saizi. Kuti udzikise huwandu hwe data mune ino faira, sarudza zvimwe zvinhu zvausingachade, wobva waita zvachose (shift + del) zvidzime.
Basa 'Microsoft Exchange Server' rakakanganisa kukanganisa (0x00040820): 'Zvikanganiso mukuyanana kwekumashure. Muna most kesi, rumwe ruzivo rwunowanikwa mune yekufananidza log mune iyo Yakabviswa Zvinhu folda. '
Haugone kuteedzera chinhu.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, Microsoft haina nzira yekugadzirisa dambudziko rakakura refaira rePST zvinogutsa. Mhinduro yakanakisa chigadzirwa chedu DataNumen Outlook Repair. Iyo inogona kudzoreredza yakawandisa PST faira pasina chero kurasikirwa kwedata. Kuti uite izvi, pane dzimwe nzira mbiri:
Kana iwe uine Outlook 2003 kana yepamusoro shanduro dzakaiswa pakombuta yako, ipapo unogona chinja iyo yakawandisa PST faira mune iyo nyowani Outlook 2003 unicode fomati, iyo isina iyo 2GB muganho. Iyi ndiyo nzira inosarudzika.
Kana iwe usina Outlook 2003 kana yepamusoro shanduro, ipapo unogona kupatsanura rakakura faira rePST kuva mafaera akati wandei. Faira rega rega rine chikamu chedata mune yekutanga PST faira, asi iri pasi pe2GB uye yakazvimiririra kubva kune vamwe kuitira kuti iwe ugone kuiwana zvakasiyana neAptlook 2002 kana yakaderera vhezheni pasina matambudziko. Iyi nzira isinganetsi sezvo iwe uchida kubata akawanda maPST mafaera mushure mekuparadzaniswa kushanda.